PE mkpofu mkpofu TPE mkpofu uwe aka CPE disposable gloves akpa nkpuchi
Ekwentị ： +8615221892684
Disposable agbatị PE gloves
TPE mkpofu uwe
Ngwunye uwe CPE nwere ike iwepu
Akpa-akpa pouch akpa
Na-akwado onwe nozulu akpa maka mmiri mmiri
Ahaziri guzoro pouch akpa maka nri ngwugwu
Acha aluminum foil nkwụnye-elu pouch akpa na zipa
Atọ n'akụkụ akara akpa
Atọ n'akụkụ akara nkpuchi nkwakọ akpa na zipa
Atọ n'akụkụ akàrà ịchọ mma bag akpa
Atọ-n'akụkụ akara agụụ aluminum foil akpa
Atọ-n'akụkụ akara uzo uzo nkwakọ akpa
Akpa akàrà anọ
Anọ n'akụkụ akàrà nri nkwakọ nri
Asatọ n'akụkụ akara akpa
Asatọ n'akụkụ akara ebili akpa
Uwe na akpa nkwakọ ngwaahịa
Agba nkwakọ film mpịakọta
Pet nri nkwakọ akpa
Tea tii nkwakọ akpa
Kedu otu esi atụle ike akara ọkụ nke plastic akpa?
12 ụzọ iji melite anwụ ngwa ngwa nke efere ebi akwụkwọ
Oyi kpọnwụrụ chọrọ arụmọrụ maka ihe nkwakọ ngwaahịa
Food nkwakọ akpa nnyocha ọkọlọtọ
Ihe dị iche n’etiti akpa aluminom na akpa akpa aluminium
Ihe nyocha nke akpa tii akpa
Ọmụma nke njirimara nke aluminom foil akpa
The development na-emekarị nke nkwakọ imewe
Obere iwebata nozulu guzoro-elu pouch
Kedu ihe ndị dị na akpa nkwakọ ngwaahịa?
Ndụmọdụ ndị WHO nyere ndị na-eri nri ka ha jiri uwe ha nwere ike ịchụpụ
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'agbata aka aka PVC na PE gloves
Kedu ụdị ihe dị mma maka akpa ngwakọ ngwa ngwa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ?
Food nkwakọ bag ihe onwunwe Ọdịdị iwebata
Tea akpa nkwakọ iwebata
China High quality Plastic uwe soplaya
Pee a na-agbanyụ uwe, TPE nwere ike iji ya mee ihe, CPE nwere ike iji chụpụrụ gị n'ọrụ
Tozuru okè onyinye nkwakọ bag mmepụta factory
Akpa akàrà atọ, Akàrà akàrà anọ, Nọgidenụ obere akpa, Pàkwà na akpa akpa
Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd. bụ oge a na enterprise ọkachamara na-ebi akwụkwọ nke plastic mgbanwe nkwakọ, ike na 2008. The ngụkọta nke ebe nke Shanghai factory: 6000 square mita, The factory e mere dị ka a 300,000-larịị ọcha ogbako. dị ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ dị ugbu a: karịa mmadụ 65, yana otu ndị isi ọrụ na teknụzụ ndị rụchara ọrụ na ọtụtụ afọ. The ụlọ ọrụ nwere otutu mgbanwe nkwakọ mmepụta edoghi: elu-ọsọ ebi akwụkwọ igwe, mgbaze-free laminating igwe, akọrọ laminating igwe, elu-ọsọ slitting igwe, multi-ọtọ akpa Ndinam igwe na kwekọrọ ekwekọ ngwaahịa nnyocha na ule ngwá, niile nke na-na na-eduga ná ọkwa ụlọ.
Rich ahụmahụ na nkwakọ ngwaahịa mmepụta
Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ nke oge a bụ ọkachamara na mbipụta akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa rọba, nke e guzobere na 2008. Mpaghara niile nke ụlọ ọrụ Shanghai: mita 6000, na mkpokọta ụlọ ọrụ Anhui Guangde: 15,000 square mita. Anyị tumadi undertakes na imewe na-ebi akwụkwọ nke nkwakọ akpa. Ike oru ike, akụrụngwa dị elu.
Professional mmebe ahịa otu docking
Companylọ ọrụ anyị nwere ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ọrụ ahịa iji jikọọ na ndị ahịa ma na-agbaso ọganihu nke usoro ọ bụla. Nye ọrụ nlekọta ọkachamara tupu ịnye iwu. N'ime usoro iwu, onye nrụpụta na onye njikwa ahịa ga-enye nkwado na nkwenye na nkọwa niile. ndị otu anyị ga-agbaso nzaghachi ndị ahịa mgbe ha natara ngwongwo.
Ezigbo obibi akwụkwọ na akpa na-eme mmesi obi ike
Mgbe ha nwere akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ ọrụ ahụ etinyekwara aka na itinye usoro njikwa njikwa zuru oke. Ọ gaferela usoro nchịkwa usoro njikwa SO9001-2008 ma nwee asambodo dị mkpa gụnyere nkwakọ ngwaahịa QS. ma nwee ike inye ndị ahịa si mba ọzọ ọrụ nkwụsị dịka mmepụta, nkwupụta omenala na mbupu.
Ngwaahịa anyị na-ekpo ọkụ
Pee disposable uwe
Akpa mkpuchi ọgwụ
Arịrịọ maka see okwu
PE uwe aka
TPE Uwe aka
Mgbatị PE PE
Atọ n'akụkụ akara akpa ịchọ mma
Atọ n'akụkụ akara akara mkpuchi ahụike
Atọ n'akụkụ akara aluminum foil akpa
Atọ n'akụkụ akara agụụ akpa
Aluminium foil-eguzo-elu pouch akpa
Iguzo ọtọ nozị akpa maka mmiri mmiri
Bilienụ akpa obere akpa maka nri
© Ikike niile nke Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd.
Ikike niile nke Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd.
Hapụ ozi gị, ahịa anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike!